ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » တစ်ခုအံ့အားသင့်စေနိုင်သောပထမဦးစွာနေ့စွဲဖူးလုပ်နည်း
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: အောက်တိုဘာ. 21 2020 |5မိဖတ်ပြီးသား
တစ်ဦးကပထမဦးဆုံးနေ့စွဲနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်တင်းမာအချိန်ရှိနိုင်ပါသည်. မျှော်လင့်အားအဘယ်သို့မျှမပြုသိတယ်, ပင်သင်အွန်လိုင်းဒါမှမဟုတ်ဖုန်းပေါ်တွင်နှင့်ဖြစ်ကောင်းလူတစ်ဦးအားမိန့်တော်မူသည်မှန်လျှင်အသင်သည်အတော်လေးသူတို့ကိုကောင်းကောင်းသိသည်ဟုခံစားရ, လူအများစုကတစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲမီဦးနှောက်အာရုံကြောခံစားရလေ့. ဒါကြောင့်ဒီမှာကြီးမြတ်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲရှိသည်တချို့အကြံပြုချက်များမှာ.
တိုတောင်းသောပထမဦးဆုံးနေ့စွဲပါ - ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအနည်းငယ်တင်းမာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတိုလုပ်ရစံပြနှင့်ချို၏. ဒီနည်းလမ်းသင်သည်အတူတကွကြီးမြတ်အချိန်ရှိသည်များနှင့်မြင့်မားသောအပေါ်ပြီးစီးခြင်းနိုင်. သင်အွန်လိုင်း chatting လုပ်နေကြတယ်ကြသောအခါသင်တို့ကိုချိတ်ဆက်ခဲ့ကြပေမည်ဘယ်လောက်နေပါစေ, သင်လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံသောအခါလုံးဝကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်, နှင့်သင်အမှန်တကယ်အသက်တာ၌သူတို့နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းအထိရသွားကြပါတယ်ဘယ်လိုသိဘယ်တော့မှမ. ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤသည်းခံခြင်းတိုတိုကိုပထမဦးဆုံးနေ့စွဲကိုစောင့်ရှောက်.
ဤလမ်းလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူသက်သာမခံစားရဘူးဆိုရင်စောစောစီးစီးထွက်ခွာနိုင်. သို့သော်သင်ဆိုလျှင် THE တကယ်သူတို့လို, ဒါကြောင့်အတိုချုပ်ရက်စွဲစောင့်ရှောက်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်. သူတို့ချိန်းတွေ့ကြသောအခါလူဖြစ်စေတစ်ဦးကကြီးမားသောအမှားလွန်းလျင်မြန်စွာအတူတကွအချိန်အများကြီးဖြုန်းဖို့ဖြစ်တယ်. သင်တို့သည်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကြိုက်သည့်အခါအတူတူအချိန်ဖြုန်းဖို့လိုသဘာဝကျဖြစ်ပေမယ့်, ဒါကြောင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုမိုနှေးကွေးစွာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပါက connection ကိုပိုပြီးသဘာဝကျကျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟု. သင်တဖြည်းဖြည်းအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်သိရန်ရနိုင်ပါဒီနည်းလမ်း. သင်ညာအစအဦးမှာလည်းမရရှိနိုင်လျှင်သင်တို့ကိုလည်းအချင်းချင်းပိုမိုတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်. ကျန်းမာတဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သီးခြားဘဝများအပြင်အသုံးစရိတ်အချိန်ချိန်းတွေ့စောင့်ရှောက်.
တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွေအတွက်ညစာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအောင်စိတ်ကိုရှောင်ပါ၌ဤ Bearing. ဒါကြောင့်ရွားလှဖြစ်ရအံ့သောငှါထွက်လာလှည့်လျှင် (ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှ) သင်အနည်းဆုံးတစ်နာရီကနေတဆင့်ထိုင်ရလိမ့်မယ်, ပုံမှန်အားဖြင့်အချိန်ကြာကြာ, သူတို့နှင့်အတူ, သို့မဟုတ်အစောပိုင်းထားခဲ့ဖို့အလွန်ရိုင်းစိုင်းဖြစ်.
ပျော်ရွှင်စရာတစ်ခုခုကိုလက်လုပ်ပါ - ဘားတွင်တစ်ဦးကိုသောက်ရှိသမျှသောအတီထွင်မဟုတ်ပါဘူးတစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲများအတွက်ဘုံရွေးချယ်မှုဖြစ်ပေမယ့်. စသည်သင်တို့တရားဝင် setting ကိုတယောက်ကိုတယောက်ထံမှအနှံ့ထိုင်နေကြတယ်သည့်အခါရေခဲကိုချိုးဖျက်ဖို့အနည်းငယ်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. ကမြန်ဆန်လွယ်ကူသောကြောင့်ကော်ဖီသိမ်းပိုက်မှုများအလားတူသွေးပြန်ကြောများတွင်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲများအတွက်ကောင်းပါသည်နိုင်ပါတယ်, သို့သော်သင်တကယ်မယ့်အစားအပေါ်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာတစ်ခုခုနှင့်လက်မလိုက်မသွားဘာကြောင့်အထင်ကြီးစေချင်တယ်ဆိုရင်. သင်အတူတကွတစ်ခုလှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတာဘယ်အရပ်တစ်ခုခုကိုရွေးပါ, ဒီအဖြစ်ပိုကောင်းအပေါ်ပိုပြီးလက်ကိုရေခဲကိုချိုးကိုကူညီနိုင်. နမူနာကောင်းအတူတကွချက်ပြုတ်နေကြတယ်, အဆင်းလှသော setting ကိုတစ်ဦးလမ်းလျှောက်သွားမယ်, အိုးခွက်သို့မဟုတ်သင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်ဘယ်မှာတစ်ခုခု. သင်အတူတကွတစ်ခုခုလုပ်နေပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ဤသည်မှာသင်၏နှစ်ဦး၏ဖြတ်ဖိအားယူမည်. ဒါဟာသင့်ဥပဓိရုပ်ကိုပိုပြီးသဘာဝကျကျတဆင့်လာရန်ခွင့်ပြု, အစားစားပွဲအနှံ့မှာ 'တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း' သို့လှည့်ရက်စွဲထက်, သင်တစ်ဦး bar မှာဖြည့်ဆည်းသည့်အခါမကြာခဏဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်.
ဘေးကင်းလုံခြုံ Be - ဒါက dater ရဲ့ mantra ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရမည်, အထူးသဖြင့်တစ်ခုတည်းမိန်းမတို့အဘို့. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့်အများပြည်သူအရပ်ဌာန၌ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှါသင့်ကိုအစဉ်အမြဲစိတ်ထဲတွင်အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဘေးဖယ်ထုတ်ရမည်ကိုမဆိုပဲကျွန်တော်ဝင်. သူတို့အိမ်၌မှာညစာသွားရန်သဘောတူမပြုပါနဲ့. သင်အွန်လိုင်းပြောနေတာမှတစ်စုံတစ်ဦးကသိမည်သို့ခံစားရသည်ကောင်းစွာနေပါစေ, သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအချိန်ယူမှီတိုင်အောင်သင်တကယ်တစ်စုံတစ်ဦးကဘယ်လောက်စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ပြောပြဘယ်တော့မှမနိုင်. လည်း, သင့်ရဲ့ပင်ကိုယ်သို့ယ့်တေးသွားကို (ကောင်းဗီဇ). တစ်ခုခုသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကညာဘက်မခံစားရပါဘူးတဲ့အခါသင်အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့်များသောအားဖြင့်သင့်ရဲ့ပင်ကိုယ်သင်သည်သူပြောလိမ့်မည်ဟုလည်းမရှိ. အဲဒါကို Listen အမြဲတမ်းပထမဦးဆုံးဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုတင်.
သင်သည်သင်၏နေ့ရက်တွင်သွားမှီသင်တို့စိတ်ကို၏ညာဘက်ဘောင်အတွင်းဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ - များစွာသောလူ့ဖြောင့်အလုပ်မှမိမိတို့ယနေ့အထိသွား, ဤဘာမှမမှားရှိစဉ်အခါကသင့်ရဲ့နေ့စွဲတွေအတွက်စိတ်ကို၏ညာဘက် frame ကိုထပြသသောသေချာအောင်လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်. သင်၏ဦးခေါင်းသင့်ရဲ့ 'လုပ်ဖို့' 'စာရင်းပေါ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ရက်စွဲအပေါ်အများကြီးပျော်စရာဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ! သင်ထဖွင့်မယ်ဆိုရင်အလားတူအလေးပေး, မပျော်နှင့်သင်ကောင်းတစ်ဦးပထမဦးဆုံးစိတ်စွဲမှတ်စေမည်မဟုတ်ညည်းတွား. သင်သည်သင်၏နေ့ရက်တွင်ပယ်ဦးရှေ့မှာကိုယ်ကိုကိုယ်ဖြေလျော့ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ထားရန်မိနစ်အနည်းငယ်ယူပါ. တချို့အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါနှင့်သင့်လျော်သောပါကအပန်းဖြေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်. သင့်ရဲ့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ပါ - သင်သွားရက်စွဲချင်ပါတယ်ဘယ်လောက်မြင်ယောင်. သငျသညျအလုပျမှဖြောင့်သွားပြုပါရင်တောင်သင်ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာဤနေစဉ်လုပျနိုငျ.
တချို့အမျိုးသမီးတွေကိုယ်ထိလက်ရောက်အဆင်သင့်ရတဲ့နာရီ, ဒါပေမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်နေမည်သည့်အချိန်ကိုမဖြုန်းပါနဲ့. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်အတူယုံကြည်စိတ်ချကြောင်းသေချာစေဖို့ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ပေါ်မှာနာရီအချိန်ဖြုန်းအမှန်တကယ်ဖိအားကို add နိုင်ပါတယ်. အဲဒီအစားကိုယ့်ရှည်စွာအလုံအလောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမတ်ကြည့်ရှုစေနှင့်ကောင်းမွန်သောခံစားရန်သုံးဖြုန်း, ထို့နောက်သင့်စိတ်ကိုပြင်ဆင်နေလည်းမိနစ်အနည်းငယ်ဖြုန်း. အကောင်းဆုံးကတော့သင်တို့အကောင်းမြင်နဲ့အတော်လေးအေးဆေးခံစားသင့်ရဲ့ရက်စွဲများအပေါ်သွားလိမ့်မည်. ၎င်းသည်သင့်အားသင်အဆင်သင့်ရတဲ့ပင်အခန်းပတ်လည်ကခုန်ကြရစဉ်အချို့မြှင့်တင်နိုင်ဂီတကစားရန်ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ပါတယ်. သင်၏စိတ်သည်စုံလင်သောပြည်နယ်အတွက်သို့မဟုတ်သင်ဦးနှောက်အာရုံကြောမှန်လျှင်မရှိကြသည်ကိုတွေ့လျှင်မိမိအရက်စွဲ cancel မဆိုပြီးလျှင်. သင့်အိမ်၌အထွက်ရတစ်ချိန်ကနှင့်သင်အနားယူနှင့်ပျော်စရာရှိသည်လိမ့်မည်သည့်ရက်စွဲပေါ်တွင်မကြာခဏဆိုသလို.
သင်နေတတ်သလိုနေပါ - လူပထမဦးဆုံးရက်စွဲများအပေါ်သွားသည့်အခါတခါတရံတွင်ယင်းသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်မဟုတ်. သူတို့ကအခြားလူတစ်ဦးကိုအထင်ကြီးဖို့ကြိုးစားသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပြောင်းလဲ. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူတို့ရဲ့အာရုံကြောသူတို့ကိုပိုကောင်းသူတို့ oddly ပြုမူတက်အဆုံးသတ်ရ, အရမ်းကြိုးစားနေပါတယ်, တက် clamming သို​​့မဟုတ်ပင်အာရုံကြောကိုဖုံးအုပ်ဖို့မျက်နှာစာပေါ်ချပြီး. ဒီလုံးဝမလိုအပ်သောဖြစ်ပြီး connection တစ်ခုဖန်တီးခြင်းနှင့်သင့်သည့်ရက်စွဲနှင့်အတူပျော်ရွှင်စရာရှိခြင်းသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြှနျုပျကိုသင်အနည်းငယ်လျှို့ဝှက်ချက်ပြောပြပါရစေကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အအာရုံကြော wracking အစည်းအဝေးတစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည်ကိုသိ. လူတိုင်းပထမဦးဆုံးနေ့ရက်တွင်ဦးနှောက်အာရုံကြောခံစားရ! ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့နေ့စွဲဖွယ်ရှိသင်ကဲ့သို့နည်းတူစိုးရိမ်ပူပန်နေကြခံစားနေရတယ်လိမ့်မည်. ဒါချိတ်ကိုချွတ်သင်ကိုယ်တိုင်ကြကုန်အံ့သောသဘာဝဖြစ်. အဲဒီအစားသင့်ရဲ့အာရုံကြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်သင့်ရှေ့မှာဒီလူအကြောင်းအသစ်တစ်ခုတစ်ခုခုသင်ယူခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်သူတို့ကိုသက်သာခံစားရအောင်စဉ်းစား. သင်သည်ကိုယ်ကိုအတော်လေးသဘာဝကျကျလျှော့ပေါ့တွေ့လိမ့်မည်ဒီနည်းလမ်း. ၏သင်တန်းသင်သည်ဤအထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်တစ်ဦးလက်ကိုလုပ်ဖို့ကိုရွေးကြပြီဆိုရင်သင်တို့ကိုလည်းဖြေလျော့ရန်ကူညီပေးနိုင်သည်. သင်စိတ်အေးလက်အေးခံစားနေကြတဲ့အခါသင့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအားဖြင့်ထွန်းလင်းစေမည်. ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်. သင်တို့အများမှာအတိအကျဘယ်လောက်ပြည့်စုံပါတယ်.
ပျော်ပါစေ - အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုအတွက်ငါတို့ရှိသမျှသည်အလွန်အလေးအနက်ထားချိန်းတွေ့ယူပုံရသည်. ဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဆင့်မှာသင့်လျော်သောဘဝလက်တွဲဖော်ရှိမရှိထွက်ရှာတွေ့ခန့်ကိုမမေ့လျော့. သူတို့အသင့်လျော် Boyfriend / ရည်းစား Material နေတယ်ဆိုရင်တစ်ဦးမှာ FIRST DATE ရက်စွဲတွေရှာမဟုတ်ပါဘူး. ဒါကအကြာတွင်လာ. အခွင့်အလမ်းတွေကိုသူတို့မဖြစ်ကြ၏ – အများစုပထမဦးဆုံးဆက်ဆံရေးကိုရက်စွဲများမှဦးဆောင်မသင်ဤသိရှိလျှင်သင့်မျှော်လင့်ချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီပေးနိုင်သည်. ပထမဦးစွာရက်စွဲများလူသစ်နှင့်အတူအစည်းအဝေးနှင့်အပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ထွက်ရရန်ရိုးရှင်းစွာရှိပါတယ်, သူတို့ကကိုယ့်ကိုကိုယ်မွေ့လျော်ခြင်းနှင့်ပျော်စရာရှိခြင်းတို့အတွက်ဖြစ်ပါသည်. စကားမစပ်ဤကိစ္စတွင်တွင် 'ပျော်ရွှင်စရာရှိခြင်း' 'တကယ်အရက်မူးလာပြီသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး, တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့ရက်တွင်ရှောင်ရှားသင့်သည်နှစ်ဦးစလုံးသော (ကြောင်းသင်တစ်စက္ကန့်နေ့စွဲချင်တယ်ဆိုရင်). ငါအမြဲထွက်လာပြီးအစစ်အမှန်လောကရှိချိန်းတွေ့အကြံပြုချက်များကိုအတူအလုပ်လုပ်တစ်ခုတည်းသော client များအတွက်. ငါသည်အမြင့်မားသင့်ကိုပိုပြီးလေ့လာသင်ယူရန်ကုထုံးအဖြစ်ချိန်းတွေ့အပေါ်မှာငါ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးအကြံပြုပါသည်.
တစ်ဦးလူငယ်များသို့ Up ကိုပြီးနောက်အောင်မြင်နည်း